१८ अंकले नेप्से घट्दा कारोबार रकममा पनि ओरालो लाग्यो - UjyaloNepal
काठमाण्डौ । साताको तेस्रो दिन नेप्से मंंगलबार नेप्से दोहोरो अंकले घटेर बजार बन्द भएको छ ।
आज १८ अंक भन्दा धेरैले घटेर २९२९ विन्दुमा आएको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेर ५ अर्व १९ करोडमा झरेको छ । आज नेप्सेका अघिकास उपसूचकहरुमा रातो पोतिएको छ भने वीमा समूहरुको उप सूचक सबै भन्दा धेरै घटेको छ ।
मंगलबार विमा संस्थाको शेयर मूल्य सबे भन्दा धेरै घटेरे कारोबार भएको छ भने २२२ कम्पनीहरुको शेयर कारोबार भएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा‚ पत्रकारलाई प्रवेश रोक
आत्मनिर्भर लघुवित्तको आईपीओ खुल्दै, कहिले र कती ?
युनियन लाइफको आईपीओ डिम्याट खातामा आईपुग्यो , यस्तो छ आपनिङ्ग रेञ्जको संकेत !
२०७८ श्रावण १७ गते, आईतवार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0